Yini aqukethe amaprotheni? Uhlu imikhiqizo eminingi ewusizo
Impilo umuntu kufanele agcwalise futhi udle ukudla okunempilo equkethe amaningi amavithamini kanye izingxenye amaminerali. Omunye wabo, yebo, ingabe amaprotheni. Ngaphansi kwethonya izinqubo zangaphakathi amaprotheni aguqulwa ku amino acid, futhi zibalulekile ngakho ngathi ukubuyisa imisipha, isikhumba, futhi wonke umzimba. Labo ngempela abanendaba ngempilo yabo siqu, ngizibuze ngalokho kuqukethwe amaprotheni. Ukuze sikwazi ukuphendula ngokungananazi, kubalulekile ukuqonda kabanzi amatemu.
Amaphrotheni kungaba yemifino kanye isilwane imvelaphi. Emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukuphila komuntu uzodinga izingxenye ezahlukene, ke kubangelwa yobudala, ubulili, umsebenzi jikelele ngokomzimba. Yini iqukethe amaprotheni yemifino imvelaphi? Eyokuqala nokunye okufana nokolweni, oatmeal nelayisi. Le mikhiqizo ingatholakala cishe kunoma iyiphi ingxenye yokudla. Amantongomane, okusanhlamvu Pshenko, ummbila, i-oats, zonke izinhlobonhlobo Ubhontshisi wayecebe kakhulu amaprotheni zemifino. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi lokhu kudla ejwayelekile ngisho wokuqukethwe lelisetulu carbohydrate. Yini aqukethe amaprotheni okuvela ezilwaneni? Yiqiniso, amaqanda, okungukuthi izikhupha. Futhi okusezingeni eliphezulu amaprotheni wokuqukethwe e izinhlanzi, imikhiqizo yobisi efana ushizi, cottage shizi noma ubisi. Ohlwini ungakwazi ukuletha ngokuphepha ngisho soy nemikhiqizo yalo, ufulawa ebangeni lokuqala, Tofu. Akunakwenzeka ingasaphathwa mayelana inyama: yenkomo, inkukhu, unogwaja, iwundlu. Kufanele kukhunjulwe ukuthi inyama kusetshenzwe amazinga amaprotheni uwela kakhulu. ebaluleke nakakhulu ukudla ukhulelwe abesifazane lactating nabantwana.
Ukudla okune-amaprotheni, it is hhayi Kunconywa by ukushisa. Naphezu kweqiniso lokuthi amaprotheni emva yokuhlanza kufakwe kangcono futhi ngokushesha, ngakho-ke ilahlekelwa kubalulekile amino acid. Ikakhulukazi umonakalo omkhulu isicelo imikhiqizo ukuqanda defrosting okwalandela usebenzisa microwave oven. Ukuze ugweme amaprotheni ukuntula kulokhu oludingayo ukungeza ukudla yakho yokudla angadingi mphumela.
Ukudla aqukethe amaprotheni, yebo, enempilo. ukuntula wayo kungaholela emiphumeleni engathí sina kakhulu. Futhi falling amasosha omzimba, ukukhathala okusezingeni eliphezulu, izinkinga inkumbulo, ukwehluleka hormone, usungaqala ngisho izinguquko ezingenakuhlehliswa esibindini. Ukunciphisa amaprotheni eyanele kuvimbela ukugaya evamile kanye nezinye izinto ezibalulekile.
Efingqa on isihloko amaprotheni lokho equkethwe, ungakwazi ukusho amazwi ambalwa. Ukuze uthuthukise ngokugcwele emzimbeni womuntu, akunakwenzeka ukusebenzisa umkhiqizo olulodwa. Kudinga ukulungiswa nokudla okufanele futhi engayitholi njalo nokudla okune kokubili nezitshalo nezilwane amaprotheni. Phakathi kwezinye izinto, izazi zithi inhlanganisela ukudla okuthile kungandisa bioavailability yayo. Amaqanda inhlanganisela obuhle corn noma nobhontshisi, usoya, nokolweni. umthetho Universal kuyinto elibona nxazonke yemifino kanye isilwane amaprotheni.
Russian Oil: ngezibuyekezo nezithombe
Umlando amakhekhe. Izinhlobo amakhekhe umhlobiso. ukhilimu amakhekhe
Inyama ewusizo: izici, izakhiwo, kanye nokusetshenziswa izincomo
Incazelo yendlu yebhodi "Cold River" (Abkhazia)
U-Aleksey Pimanov: Biography futhi ukuphila siqu (izithombe)
U-Andrei Boltenko no-Marina Alexandrovna: injabulo kufanele ibonakale
Ivanovo Puppet Theatre: Ikheli repertoire